Sei Vashambadziri Vachikunda paMarch Kupenga? | Martech Zone
Chitatu, Kurume 16, 2016 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
Muna 2015, kwaivapo 11.3 mamirioni avhareji evaoni vese yeCAAA yaKurume Kupenga, pamwe nerekodhi 80.7 miriyoni inorarama yevhidhiyo vaoni. Mutambo wakanyanya kutariswa wakakwezvwa Mamiriyoni makumi matatu nemasere evaoni. Kana iwe usingafunge kuti idanho hombe, iwe unofanirwa kuedza kushanda mukati meguta reIndipolis mwedzi uno (uko kune edu mahofisi)! Tichave tichishanda kubva kumba kazhinji mwedzi.
ichi infographic kubva kuKoeppel Direct inosimbisa yakakura mikana yemakambani uye vashambadzi vanofanirwa kusvika kune vateveri vemitambo kuburikidza muchinjikwa-chishambadziro panguva yaKurume Kupenga.
Mwaka wegore rapfuura Kurume Madness ekushambadza manhamba aishamisa - 126 mabhenji akashandisa $ 1.163 bhiriyoni pamakumi matatu-echipiri terevhizheni nzvimbo dzaisvika $ 30 mamirioni imwe neimwe munaKurume Kupenga. Asi iyo ingori chidimbu cheaya iceberg. Iyo Kurume Kupenga mwaka wekushambadzira mukana wakakura wekushambadzira-chishambadziro kushambadzira, uye gore rino raKurume Kupenga kutaridzirwa kunoonekwa kuti kunowanikwa kunyange zvimwe zvirimo kure neterevhizheni.
Dhijitari kushambadzira kushambadzira munaKurume Kupenga yaive $ 30.4 bhiriyoni pamafoni emafoni uye mapiritsi uye zvirokwazvo icharova iro rekodhi gore rino. Imwe $ 27.6 bhiriyoni yakashandiswa pane desktop uye laptop kushambadzira panguva ye 17.8 mamirioni emaawa ekushambadzira vhidhiyo.
Sezvo skrini yechipiri neyechitatu zvanyanya kufarirwa, vashambadziri vari kushanda kuti vatore mukana wevanoona muchinjikwa- pakati peterevhizheni, desktop, piritsi uye smartphone. Unoda kuziva kuti ndiani mumwe anoronga kuita mari, kwavanoronga kushandisa iwo madhora ekushambadza, uye zvakadii chaizvo? Apa chienda…
Tags: famba kupengakufora kupenga kushambadzirakufora kupenga kushambadzirancaakushambadzira kwemitambo
Isu Tava Kuwanikwa muApple Nhau!